I-LOU NI DE RIBILLWAGEN EFUDUMELEYO I-AIR CONDITIONING/I-WIFI - I-Airbnb
I-LOU NI DE RIBILLWAGEN EFUDUMELEYO I-AIR CONDITIONING/I-WIFI
Autoire, Occitanie, France
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguJohn
Indlu yamatye enomtsalane isandul 'ukulungiswa, phakathi kweLoubressac kunye ne-Autire (ilali yakudala eyahlulwe phakathi kweedolophana ezintle kakhulu eFransi). I-Lou Niou de Ribillou yivaranda endala ukususela ngo-1880, kwindawo epholileyo ephakamileyo yentlambo i-Dordogne, ehonjiswe ngesitayile esidumileyo, ngokubambisana kwezinto zale mihla kunye nokunyaniseka... ngokukhankanya ngokukhethekileyo indawo yokuhamba yezitepsi eyenziwe nge-driftwood!
Apha siyazixabisa izibane ezikhanyayo kuwo onke amagumbi, kunye nendawo etofotofo eyenziwa ziindwendwe ; phandle, sithanda igadi evalekileyo enemithi kunye neentyatyambo kunye nepuli yayo yabucala efudumeleyo ukusuka nge-01 ukuya nge-01/10 (kunokwenzeka kuxhomekeka kwimozulu ngoMeyi nango-Oktobha). I-Lou Niou yindawo entle yeholide kuwo onke amaxesha onyaka.
Ngaphantsi, igumbi lokuhlala elinendawo yokuhlala, kunye nendawo yekhitshi enezinto ezidibeneyo, indlu yangasese eyahlukileyo. Phezulu, amagumbi ayi-2 aphezu kophahla nomoya opholileyo ngamnye unesikrini seTV esicaba kunye neebhedi eziyi-2 80x200 onokuzidibanisa, omnye unebhedi eyi-160 ; igumbi lokuhlambela eline-shower yaseItali kunye ne-wc. Impompo yobushushu, umatshini okhupha umoya obandayo okanye oshushu, ii-roller shutters ezilawulwa ngombane, zonke izixhobo zosana ezikhoyo, i-wifi. Igadi ebiyelweyo, ipuli yabucala ye-3x3.20 kunye no-1.75 ubunzulu obuphezulu obugcinwe yibhari ye-tarpaliday; ityeya enefenitshala yasegadini, i-parasol, ii-sun lounger, i-plancha yegesi.
4.95 · Izimvo eziyi-59
Ixesha lokubhalisa xa ufika: 17:00 - 19:00
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Autoire